नयाँ दिल्ली, २९ माघ । दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले कुल ७० सिटमा ६३ अर्थात् ८८ प्रतिशत सिट जितेको छ । अरविन्द केजरीवाल पुनः दिल्लीका मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुने भएका छन् । आम आदमी पार्टीले ६२ र भाजपाले ८ सिट जितेको तथ्यांक हेर्दा तपाईंलाई लाग्न सक्छ, आपले सजिलै चुनाव जित्यो । तर, त्यस्तो भने होइन ।
एउटा यस्तो समय पनि आएको थियो जतिबेला चुनाव आम आदमीको हातबाट बाहिर जान थालेको थियो । आपको चुनावी रणनीति बनाउने एक महत्वपूर्ण व्यक्तिले चुनावी रणनीतिबारे खुलासा गरेका छन् । उनका अनुसार यो रणनीति गत वर्ष मेमा भएको लोकसभा निर्वाचनलगत्तै सुरु गरिएको थियो ।
के थियो योजना ? सुनै उनै रणनीतिकारको मुखबाट …
चार बुँदामा बुझ्नुहोस् आपको रणनीति
१. सबैभन्दा पहिला अरविन्द केजरीवाललाई पुनः मुख्यमन्त्रीको रुपमा घोषणा
नयाँ रणनीतिको पहिलो काम अरविन्द केजरीवालको भूमिका तय गरियो । आम आदमी पार्टीमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर अत्यधिक द्विविधा थियो कि आउँदो चुनावमा आफूलाई पुनः मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने कि विपक्षीले जस्तो प्रतिक्रिया मात्रै दिएर बस्ने । किनकि जनताले आपलाई मोदीसँग लड्नका लागि प्रतिपक्षी अनुहारको रुपमा लिएका छैनन्, उनीहरुले त दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको रुपमा उनलाई चाहन्छन् ।
यो सामान्य कुरा लाग्छ तर विषय एकदमै महत्वपूर्ण छ । जस्तो हामी शाहिन बागमा अल्झिएनौं । राम मन्दिरबारे प्रतिक्रिया दिएनौं । त्यतिबेला केजरीवाल मोदीसँग डराइराछ कि भन्ने लाग्यो । तर डराउने कुनै कुरा थिएन । किनकि प्रदुषणबारे केन्द्र सरकारको जमेर विरोध गरिएकै थियो । किनकि यो दिल्लीसँग जोडिएको मुद्दा थियो । दिल्ली बाहिरको मुद्दालाई छाडियो । जस्तो कि- केरलाको सबरीमालाबारे प्रतिक्रिया दियो भने जनतालाई लाग्छ कि हामीले दिल्लीको सिएम बनाएको हो, यो केरलातिरको मुद्दामा किन अल्झिएको छ ? यसर्थ, केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा व्यवहार गर्ने भूमिका दिइयो ।
२. पोजिशनिंगमा परिवर्तन ल्याउन विज्ञापनमा केजरीवालको तस्बिरसम्म बदलियो
अरविन्द केजरीवालको पोजिशनिंगमा पनि परिवर्तन गरियो । जस्तो आप प्रदर्शन गर्ने, विद्रोह गर्ने, क्रान्ति गर्ने शक्ति होइन, किनकी उनी सीएम हुन् । यसर्थ, उनको सरकारी विज्ञापनमा देखाउने तस्बिर पनि बदलियो । पहिला जुन फोटो थियो, त्यसमा उनी एकदमै रिसाएको देखिन्थे । आन्दोलनमा मुडमा देखिन्थे । त्यसलाई फेरेर उनको सामान्य हाँसिरहेको अनुहार भएको तस्बिर राखियो । किनकी उनी एक सीएमजस्तो देखिनुपर्छ । जस्तो कि उनी घरको ठूलो मान्छे जस्तो देखिऊन् । विश्वास लाग्दो । २०१५ तिरको फोटोमा अब अरविन्द आए, उनले संसार बदल्नेछन् भन्ने प्रकृतिको तस्बिर थियो । उनले राजनीति बल्नेछन् । राजनीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नेछन् ।
यी दुईवटा ठूलो काम गरियो । यी दुई परिवर्तनपछि गत जुनबाट केजरीवालको पूरै चित्र बदलिएको थियो । तस्बिर होस् कि सन्देश प्रवाह गर्ने तरिका होस् वा उनको भूमिका ।
३. चुनावअगाडि रिपोर्ट कार्ड दिइयो ताकि विश्वास बनोस् र अरु बढोस्
चुनावभन्दा पहिला आपको तर्फबाट रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक भयो । यसमा पार्टीले के के काम गर्‍यो भन्ने कुरा स्पष्टसँग राखियो । पहिला कामहरुका बारेमा जानकारी दिएर विश्वसनीयता स्थापित गरियो । अभियानको सुरुवात नै रिपोर्ट कार्डबाट भयो र कार्डमा हामीले दिल्ली नै फेर्‍यौं वा सबै सडक सुधार गरियो भनेर लेखिएन । बरु दावी गरिएको कुरालाई तथ्यांकको साथ १० वटा बुँदामा जनताको सामु राखियो ।
जस्तो कि बिजुली निशुल्क दिने भनिएको थियो । रिपोर्ट कार्डमा २०० युनिटसम्म निशुल्क दिइएको बारे लेखिएको थियो । यसबाट कुरा एकदम क्लियर भयो । विद्यालयको कुरा पनि तथ्यांकमा देखाइयो । ६०० पानाको ग्यारेन्टीकारंड बनाएनौं । बरु बुँदामा १० वटा विषय राखियो । यस्तो काम बिहारमा नीतिश कुमार र आन्द्र प्रदेशमा जगन रेड्डीसँग पनि गरिएको थियो । रिपोर्ट कार्डमा दिल्लीलाई तारमुक्त बनाउने कुरा पनि राखियो । तारलाई भूमिगतरुपमा विस्तार गरिने उल्लेख गरियो । ग्यारेन्टी कार्डलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने त्यसमा एउटा निरन्तरता देखिन्छ । ग्यारेन्टी कार्ड केवल मञ्चबाट घोषणा मात्र गरिएन, जस्तो कंग्रेसले पनि प्रेस कन्फरेन्स गरेर भन्छ । आपका मानिसहरु यो कार्ड बोकेर घरघरु गए । विधानसभामा कम्तिमा पनि एक उम्मेदवारले २५ हजार घरसम्म यो कार्ड पुर्‍याएका छन् ।
४. ‘लगे रहो केजरीवाल’ले त चमत्कार नै गर्‍यो
‘लगे रहो’को अर्थ हो आपको क्षमतामा विश्वास जनाउनु । यसले थप सन्देश दिन्छ कि चुनौती धेरै छन्, अहिले नै सबै ठिक भइसकेको छैन । केही समय अझै मेहनत गर्नुपर्छ । जस्तो कि कुनै विद्यार्थीले परीक्षा दिन्छ, प्रारम्भिक परीक्षा सकिन्छ, तर मुख्य परीक्षा आएको छैन भने अभिभावकले ‘बाबु मेहनत गरिराख’ भन्छन् । किनकि, जनतालाई लागेको छ कि आपले केही गर्छ, ऊसँग केही गर्ने क्षमता छ । यसले एक कार्यकालमै सबै कुरा बदल्न सकिन्नँ तर तय गरिएको दिशा भने ठिक छ भन्ने सन्देश जान्छ । निरन्तरता दिँदा केही हुन्छ भन्ने विश्वास लगाउँछ । यो सन्देशले चमत्कारको काम गर्‍यो ।
भाजपाको दुई गल्तीले आपलाई सघायो
आपले गत ५ वर्षमा कुनै पनि चुनाव जितेको थिएन । लोकसभा पनि हार्‍यो । नगर निगमको चुनाव हार्‍यो । विश्वविद्यालयको चुनाव हार्‍यो । विधानसभाको उपचुनावमा जतासुकै हार्‍यो । उसको प्रतिस्पर्धा त्यस्तो पार्टीसँग थियो जसले निरन्तर चुनाव जितिरहेको थियो । जसको ठूलो र बलियो संगठन छ । जोसँग मोदी र अमितजस्ता व्यवस्थापक छन् । तर, आम आदमीमा एक अनुहार एक व्यवस्थापक मात्र ।
भाजपाले ३०० सांसद, ११ मुख्यमन्त्री नै चुनावमा लगाइदियो । प्रधानमन्त्री पनि सभामा सहभागी भए । अमित शाहले पूरै शक्ति लगाए । एउटा यस्तो समय पनि आएको थियो कि चुनावी माहौल बदलिएको थियो र आपको हातबाट चुनावी माहौल फुत्किँदै थियो ।
यसबीच भाजपाले दुई ठूला गल्ती गर्‍यो । पहिला केजरीवाललाई आतंककारी भन्यो र दोस्रो उसले हिन्दू विरोध बनाउने कोशिस गर्‍यो । हामीले हनुमान चालिसा पढेर तुरुन्त यसको काउन्टर गर्‍यौं । यदि सही समयमै यस्तो नगरेको भए नतिजा अर्कै पनि आउन सक्थ्यो । भाजपासँग लडाईं एकदमै कठिन थियो । जितिसकेपछि सहज लाग्न सक्छ । तर जितपछाडिको कथा फरक छ । हरेक बुथमा जबरजस्त टक्कर थियो । २०१५ भन्दा आपको केही सिट घटेको छ । २०१५ मा भाजपाको ३२ प्रतिशत मत थियो अहिले यो ५ प्रतिशत बढेको छ ।
चुनावमा भाजपाको अभियान नकरात्मक थियो जबकि आपको सकारात्मक थियो । हामी जहाँ पनि रणनीति बनाउँछौं त्यहाँ सकारात्मक नै बनाउँछौं । जस्तो कि नीतिश कुमारको नारा थियो- बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो, नीतिश कुमा हो । यसको अर्थ हामी बिहारमा प्रगति चाहन्छौं भन्ने थियो जुन नीतिश कुमारबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने थियो । तर, भाजपाको चुनावी रणनीति पूरै नकरात्मक देखियो ।